“Kama cabsi qabin nafteyda, balse waxaan ka walwalsanaa ciyaartoyda iyo guud ahaan kooxda Tottenham” – Mourinho – Gool FM
(London) 24 Nof 2019. Macalinka cusub kooxda Tottenham Hotspur ee Jose Mourinho ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay guushii ugu horreysay uu la gaaray Spurs-ka qibradiisa cusub.
Tottenham Hotspur ayaa shalay guul 2-3 ah kaga soo gaartay kooxda West Ham United London Stadium, kulan ka tirsanaa hoyaalka Premier League.
Tottenham ayaa la dhibtoonaysay bilihii ugu dambeeyay kulamada ay ku ciyaareyso banaanka, laakiin ugu dambeyntii waxay ka gudbeen inkaarta ka heysatay, kulankii ugu horreeyay uu kooxda maamulay Jose Mourinho, taasoo ka dhigtay in macalinka reer Portugal uu farxad ka muujiyo guusha uu la gaaray Spurs-ka.
Jose Mourinho ayaa sheegay inuusan ka walwal qabin naftiisa, balse uu ka walwalsanaa ciyaartoyda iyo kooxda Tottenham guud ahaan, sababa la xiriira in kooxda ay gali laheyd god madow ah, haddii aysan guul gaari laheyn kulankan.
Mourinho ayaa wareysi uu ku bixiyay warbaahinta wuxuu ku sheegay:
“Kama walwalsaneyn xirfadeyda Tottenham, balse waxaan ka walwalsanaa ciyaartoyda iyo kooxda, guushaasi aad ayey muhiim u ahayd”.
“11 bilood kulamada banaanka, qolka labiska wuxuu ahaa bilaa muusig, qosol la’aan, farxad la’aan, haddana sidaas oo ay tahay way guuleysteen, aad ayaan ugu faraxsanahay iyaga”.